Akusiyo imfihlo ukuthi namuhla izwe ka okuxubile karate - kuyinto umzabalazo hhayi kuphela ezinzima ongagunci, kodwa futhi omkhulu ekulweni show, lapho indima ebalulekile eyadlalwa ikhono inzuzo ukuthengisa impi oluzayo, ikhono uthole yomphakathi, bonisa ukusebenza elikhanyayo phambi kwesango Octagon (agqamile kuyinto ethusayo ukuya kusuka kwekilasi kuya "amaseli"). Ngokuvamile, othanda ukulwa yesimanje - hhayi kuphela iqhawe kodwa futhi uhlobo umlingisi. Kwaba umlingisi enjalo elikhanyayo okuthiwa Conor McGregor (ukuqeqesha kuzoxoxwa ngezansi), sizobe ukukhuluma esihlokweni.
Ikusasa emhlabeni MMA inkanyezi ukuthi zizalwa ozalwa e Dublin, Ireland (nokuningi ngokunembile ngokwengxenye wayo oseningizimu) July 14, 1988. Conor McGregor, okuyiwona ukuqeqeshwa e enganginaso kusukela ebuntwaneni ukuba uvakashele isigaba football kwaba fan eliqhakazile club English kusuka Manchester. Lapho ngineminyaka engu-iminyaka engu-18 indoda endala kuhanjiswe ku Lucan, lapho ephothula esikoleni esibizwa Colaiste Cois Life. Ngemva kokuqeda isikole wafunda le plumber aze waphonseka inqubo ukuqeqeshwa emzabalazweni, kanye umhlanganyeli esizayo UFC Tom Egan. Ngenxa yalokho, Conor babonisa isithakazelo izimpi okuxubile.
Ekuqaleni McGregor waqala ukusebenza kwakhe oqokiwe Octagon ekukhanyeni isisindo isigaba, kodwa ngemva kokuchitha 12 izimpi, 10 yayo yayingaphambi enqobile ngaye, wehlela featherweight, lapho impi nje ezimbili ngokwayo wathatha ubuqhawe ibhande Cage Warriors. Kodwa lokhu kwakunganele ngoba Irishman, wabuyela isisindo ukukhanya, nakho ngakwazi abe iqhawe kokunqoba Ivan Buchinger.
Inguquko ukuze UFC
aseqala Yokuphumelela US wawa ekunyusweni Conor ukulwa ne-Marcus Brimeydzhem. Zonke umdlalo McGregor beat ophikisana naye futhi ekugcineni iwine isinqumo ngokuvumelana, okuyinto kuze kube namuhla, i-career Irishman kuphela. Zonke ezinye izimpi wayinqoba ngaphambi kwesikhathi ebesibekiwe.
I Duel phakathi Brazilian Zhoze Aldo futhi Conor okwadingeka abhekane nakho-July 11, 2015. Bahlele le ngxabano isikhathi eside, futhi iqhawe Brazilian ayebhekwa ozithandayo. Nokho, wathola ukulimala ezimbanjeni futhi waphoqeleka ukuba ahambe ibanga. Umphumela selidlaliwe izikhathi phakathi iqhawe zesikhashana Conor naseChad Mendes, owagcina yaphelela ezandleni Irish. Lokhu kunqoba avunyelwe kabusha ukuhlela nilwe Aldo ngaye.
Disemba 12, 2015 Conor McGregor, ogama isisindo ngalolo suku kwaba cishe ngo-65 kilograms, ekugcineni wahlangana Octagon nge Zhoze Aldo. Ukuze wonke umuntu ukumangala, impi eyathatha imizuzwana eyishumi nantathu nje, futhi Brazilian ukuthi akhishwe igalelo esihle esisodwa nje ubukele emhlathini, okuyinto wafaka engu- ngesibindi iminyaka emihlanu streak wakhe unbeaten.
Conor McGregor, ukuqeqeshwa ukuxuba esiphelele ukufunda ngcweti Taekwondo khona futhi kudingeke zilwe, libhekene njengendlela puncher enonya ungathumela i abaphikisi "ukulala" yimuphi umthelela. Ngaphezu kwalokho, i-Irish fighter hhayi kuphela onamandla, kodwa futhi showman oncomekayo owazi indlela unikezele ngezinsizakalo ukulwa oluzayo okumqoka izinkanuko ababemzungezile kwaze kwaba sekugcineni. Ukuze wenze lokhu, yena kakwazi ayakuzonda uthele ngokoqobo ageleza izinkulumo ezingcolile kwalabo ababephikisana nayo. Isibonelo esimangalisayo kulesi - impi yokugcina Conor McGregor Nate Diaz, lapho i Irishman singcono kakhulu yena ngenani izinkulumo okuyichilo. Nokho, akekho azophikisana neqiniso lokuthi fighter okunekhono ngaphezulu MMA ukukhuthazwa phezu ingxenye yempi kuka "Notorious" (isidlaliso of the Irish), kukhona namuhla.
Septhemba 27, 2016 kwamenyezelwa ukuthi Conor McGregor, ukuqeqeshwa okuyiwona isivele livunyelwe yezokwelapha, ubambe impi yakhe elilandelayo ngokumelene hegemony of engasindi Eddie Alvarez ku 12 Novemba.
Boxer American Wilder: ukuphila kwakhe futhi impumelelo
Ngokusebenzisa ameva ezinkanyezini. Tito Ortiz nokuphila kwakhe
Izibuyekezo abanikazi Ssangyong Actyon Ezemidlalo, incazelo, izici nezici izimoto
Indlela ukukhetha igama umfana
Bezymyannaya Ekaterina: incwadi yomlando
Sitolo sekudla lokuphekiwe (Cherepovets): Ukubuyekeza, ukubuyekezwa
Inganekwane ophilayo: Krzysztof Zanussi. umqondisi Biography Polish Kshishtofa Zanussi